ချမ်းလင်းနေ Chanlinnay: လူထုခေါင်းဆောင်ဆိုသည်မှာ
၁၉၄၆ ခုနှစ် ၊ မတ်လ၏ တစ်ခုသောနံနက်ခင်းတွင်ဖြစ်သည် ။ ပြည်ခရိုင် ၊ပန်းတောင်းမြို.နယ် ဖဆပလ ဥက္ကဌ ဦးထွန်းရွှေသည် လက်မှနာရီကိုကြည်.၍ ပန်းတောင်းကမ်းနားလမ်းဆီသို.ခပ်သုတ်သုတ်ခရီးနှင်နေသည် ။ သူ.စိတ်ထဲတွင် မှီမှမှီပါ.မလား ၊နောက်များကျနေပြီလားဟု စိုးရိမ်နေမိသည် ။ သူနှင်.အတူပါလာသော ရပ်မိရပ်ဖအချို.ကို ပင် စောင်.ရတာစိတ်မရှည်ချင် ။သူတို.လမ်းလျှောက်တာနှေးလွန်းလှသည်ဟု တွေးနေမိသည် ။ ယနေ.သည် ပန်းတောင်းမြို.တွင်နိုင်ငံရေးအရ ထူးခြားသောနေ.တစ်နေ.ဖြစ်သည် ။ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် လှည်းနေလှေအောင်းမြင်းဇောင်းမကျန် လူထုထောက်ခံမှုအပြည်.ရထားသော ဖ.ဆ.ပ.လ အခွဲ.ချုပ်ကြီး၏ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတစ်ယောက် ရောက်လာမည်ဖြစ်သောကြောင်.ပင်ဖြစ်သည် ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုကြိုဆိုရန် သူနှင်.တကွ မြို.မိမြို.ဖများသည် ကမ်းနားသို. ဦးတည်သွားနေကြခြင်းဖြစ်သည် ။သူ.အိမ်မှာ ဧည်.ခံကျွေးမွေးရေးကြိုဆိုနေရာချထားရေးများကိုစီမံနေရသဖြင်. အနည်းငယ်နောက်ကျသွားသဖြင်.စိတ်လောနေရခြင်းဖြစ်သည် ။ ဗိုလ်ချုပ်သည် ပြည်မြို.မှ မော်တော်ဖြင်.ရောက်လာမည်ဟုသတင်းရထား၏ ။ ဗိုလ်ချုပ်တရားဟောမည်.နေရာကိုလည်း မြို.အစွန်ကွင်းပြင်ကြီးတွင်စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်သည် ။
ထိုအချိန်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလိုက်ပါလာသော မော်တော်သည် ပန်းတောင်းမြို.အစွန်တွင်ဆိုက်ရောက်လာခဲ.ပြီးဖြစ်သည် ။ နွေရာသီ ရေကျ၍ သောင်ပြင်ကြီးကျယ်ပြန်.စွာထွန်းနေသောအခါမို. ခါတိုင်းမော်တော်ဆိုက်လေ.ရှိသောနေရာသို. မော်တော်သည် ဗိုလ်ချုပ်တို.ကိုရောက်အောင်မပို.နိုင်ပါချေ ။ မော်တော်ဆလင်သည် အားတုန်.အားနာဖြင်. ဗိုလ်ချုပ်ကိုကြည်.၍
“ အားနာစရာတော.ကောင်းနေပါပြီ ၊ မော်တော်ကရှေ.ဆက်သွားလို.မရ တော.ဘူး ၊ အရိပ်ထဲကပဲ ဦးထွန်းရွှေတို. လာကြိုတဲ.အထိစောင်.ပါဦး ဗိုလ်ချုပ် “
ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းသည် မော်တော်ဆလင်ပြောသောစကားများကို နားထဲသို.၀င်ဟန်မတူ ၊ ပါတ်ဝန်းကျင်ကို သေသေချာချာကြည်.ရှုအကဲခတ်နေသည် ။ ထို.နောက်တစ်စုံတစ်ခုကိုမှတ်မိဟန်နှင်.
“ ဒီနေရာကိုကျုပ်သိပြီဗျ ၊ ဂျပန်ခေတ်တုန်းက တော်လှန်ရေး မှာကျုပ်ရောက်ဖူးတယ် ၊ လာခေါ်တဲ.သူဘာလို.ထိုင်စောင်.နေမှာလဲ ၊ကျုပ်ဘာသာကျုပ်သွားနှင်.မယ် ၊ လာဟေ.ဗိုလ်ထွန်းလှ “
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် ပြောပြောဆိုဆို အပါးတော်မြဲဗိုလ်ထွန်းလှကိုခေါ်၍ မော်တော်ပေါ်မှဆင်းသွားပြီး ၊ မော်တော်မောင်း သူဘက်လှည်.ကာ
“ ဦးထွန်းရွှေတို.လာကြိုရင် ကျုပ်သူ.အိမ်ကို ကမ်းနားအတိုင်း လမ်းလျှောက်သွားပြီလို.ပြောလိုက်ပါ အိမ်ကပဲစောင်.မယ် “ သောင်ပြင်ကိုဖြတ်၍လျှောက်လာကြသော ဦးထွန်းရွှေနှင်. ပန်းတောင်းမြို.ခံများမရောက်သေးမီ ဗိုလ်ချုပ်နှင်.ဗိုလ်ထွန်းလှတို.သည် ကမ်းနားပေါ်သို.တက်ကာလမ်းလျှောက်ထွက်ခွာသွားတော.သည် ။ မိနစ်နှစ်ဆယ်ခန်.ကြာသောအခါမှ လာကြိုသောလူတစ်စုရောက်လာ၏ ။
“ ဗိုလ်ချုပ်က သွားနှင်.ပြီဗျ ၊ ဦးထွန်းရွှေအိမ်ကစောင်.မယ်တဲ . “
ထိုအချိန်တွင် ပန်းတောင်းမြို.နယ် ဖ.ဆ.ပ.လ ဥက္ကဌ ဦးထွန်းရွေအိမ်မှာ လူအနည်းငယ်ပဲရှိသည် ။ လူကြီးများက ကမ်းနားမော်တော်ဆိပ်သို.ဆင်း၍ ဗိုလ်ချုပ်ကိုသွားကြိုသည် ။ လူငယ်များက ဗိုလ်ချုပ်တရားဟောမည်. တရားဟောစင်မြင်.၀ယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်စရာရှိသည်များကိုဆောင်ရွက်ရန်ထွက်သွားကြသည် ။ အိမ်၌ ၀ိုင်းလုပ်ဝိုင်းစားအချို.နှင်. ဦးထွန်းရွှေ၏ညီတော်သူ ဦးတင်ဆွေပဲရှိသည် ။
“ ဦးထွန်းရွေ တို.အိမ်လားခင်ဗျ ၊ ကျုပ်တို.ကသူ.ဧည်.သည်တွေပါ “
အိမ်ရှေ.မှရပ်၍မေးနေသော ဧည်.သည်နှစ်ယောက်ကိုမည်သူမည်ဝါတွေမှန်း ဦးတင်ဆွေမသိ ။ယခုခေတ်လို ရုပ်မြင်သံကြား လဲမပေါ်သေး ၊ သတင်းစာစသည်များ ကလည်းတောနယ်ဘက်သို.အရောက်အပေါက်နည်းသည်မို. ဦးတင်.ဆွေသည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုကြားဖူးရုံဖြင်.ကြည်ငြိုနေသော်လည်းအပြင်တွင်တစ်ခါမျှမမြင်ဖူးပါချေ ။ သူ.စိတ်ထဲတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပန်းတောင်းသို.ရောက်လာလျင် ဝေလမင်းသားမြန်မာပြည်လာသလို ဆိုင်းနှင်.ဗုံနှင်. အကနှင်.အခုန်နှင်. ရုတ်ရုတ်သဲသဲကြိုဆိုကြမည်ဟုထင်မှတ်လျက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဆိုသူကိုမျှော်နေ၏ ။
“ ထိုင်ကြဦးဗျာ အစ်ကိုကြီး ဦးထွန်းရွှေက ဗိုလ်ချုပ်တို.ကိုသွားကြိုနေတယ် “
ဗိုလ်ချုပ်သည် ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်ပဲ ထိုင်ချလိုက်သည် ။ အပါးတော်မြဲဗိုလ်ထွန်းလှလည်းဗိုလ်ချုပ်ဘေးတွင် ၀င်ထိုင် လိုက်၏ ။
“ ဆာလိုက်တာဗျာ ၊ ဘာစားစရာရှိလဲဗျ “
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက စားစရာတစ်ခုခုတောင်းနေသဖြင်. အိမ်ရှင်ဖြစ်သူ ဦးတင်ဆွေက
“ ခက်တာပဲဗျာ ၊ စားပွဲပေါ်က ဟာတွေက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို.လာရင်ဧည်.ခံဖို.ပြင်ထားတာဗျ ၊ ကဲပါဗျာ ရော. ခင်ဗျားတို.စားဖို.နည်းနည်းခွဲပေးပါ.မယ် “
ကျကျနနပြင်ဆင်ထားသော စားပွဲပေါ်သို. ဗိုလ်ချုပ်တို.ကိုမဖိတ်ခေါ်ပဲ အိမ်ရှင်သည် ကြွေရည်သုတ် သံပုဂံပြားနှစ်ချပ်ထဲတွင်ကောက်ညင်းပေါင်းများကိုထည်.ကာ ဗိုလ်ချုပ်တို.ရှေ.တွင်လာချ၏ ။ ထို.နောက် သံဇလုံတစ်ခုဖြင်. ဘူးသီးကြော် ၊ပဲကြော် ၊ပဲနက်ကြော် များကိုလာချပေးပြီး ဦးတင်ဆွေသည် လုပ်စရာအလုပ်များကိုဆက်လုပ်ရင်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို.ကိုမျှော်နေ၏ ။ ကာကီရောင်ယူနီဖောင်းခပ်နွမ်းနွမ်းကိုဝတ်ထားသော လူစိမ်းနှစ်ယောက်သည် ကောက်ညင်းပေါင်းကို အားရပါးရပလုပ်ပလောင်းစားရင်း စကားပြောနေကြရာ သူတို.ပြောသည်.စကားထဲတွင် အင်္ဂလိပ် ၊ စက္ကူဖြူစာတမ်း ၊ လွတ်လပ်ရေးစသည်ဖြင်. မကြာမကြာပါလာသဖြင်. တယ်ကြီးကျယ်တဲ.ကောင်လေးတွေပါလားဟု ဦးတင်ဆွေကပြုံးမိသေးသည် ။
မကြာမီ ဦးထွန်းရွှေနှင်.အဖွဲ.သည် ပျာယီးပျာယာရောက်လာ၏ ။ အိမ်ထဲသို.ကမန်းကတန်းဝင်လာရင်း
“ ဟောဗျာ ဗိုလ်ချုပ် တို.ရောက်နေပြီ ၊ကြမ်းပေါ်မှာထိုင်လို.ပါလား ၊ထပါထပါ ကုလားထိုင်ပေါ်ကိုကြွပါ ၊ဒီမှာ စားသောက်စရာပြင်ထားပါတယ် “ ဟု အားတုံ.အားနာပြောလိုက်လေသည် ။ ထိုအခါမှ ငချွတ်ကလေးတွေ ၊ချာတိတ်လူစိမ်းတွေဟုသူထင်နေသော ကောင်လေးမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဖြစ်နေမှန်းဦးတင်.ဆွေသည်ထိပ်ထိပ်ပြာပြာဖြစ်ကာသိသွားခဲ.လေသည် ။
“ ရပါတယ်ဗျာ ၊ ကျုပ်တို. အခုပဲစားပြီးပါပြီ ကဲ ကျုပ်တရားဟောသွားရမယ်.နေရာကိုသာသွားကြစို. ဦးထွန်းရွှေ “ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် သူ.ကို အလေးမထားပဲ သာမန်ဧည်.သည်တစ်ယောက်လိုဧည်.ခံကျွေးမွေးခြင်းကိုခေါင်းထဲမှာလုံးဝမထားပဲ နိုင်ငံရေးတရားဟောဖို.သာပြောနေခြင်းကိုကြည်.၍ ဦးထွန်းရွှေတို.လူစုမှာ အထူးပင်အံ.သြကြည်ငြိုကြလေသည် ။
“ ခနစောင်.ပါဗိုလ်ချုပ် ၊ကျွန်တော်တို. ကားစီစဉ်ထားပါတယ် “
“ အံမယ် တယ်ဟုတ်ပါလား ကားတွေဘာတွေနဲ. ဒါနဲ.ကားကဘယ်မှာလဲ “
“ ကားက လာနေပါပြီဗိုလ်ချုပ် ၊ ဖောင်နဲ.သယ်လာပါပြီ ခနပဲစောင်.ပါ ရောက်လုပါပြီ “
“ ဘာဗျ ၊ ကားကိုဖောင်နဲ.သယ်လာတယ်ဟုတ်စ ၊ ဘယ်က ကားမို.လို.ဖောင်နဲ.သယ်ရတာလဲ “
“ ဒီလိုပါဗိုလ်ချုပ် ၊ ပန်းတောင်းမှာ ကားကောင်းကောင်းမရှိတော. ပြည်မြို.က ကားကိုဖောင်ပေါ်တင်ပြီး သယ်လာရတာပါ ၊ မကြာပါဘူးရောက်တော.မှာပါ “
ဗိုလ်ချုပ် မျက်နှာသည် ရုတ်တရက်ဒေါသဖြင်.နီမြန်းသွား၏ ။ ပထမသော် စီးစရာကားအဆင်သင်.မဖြစ်သဖြင်.စိတ်ဆိုးသွားခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဦးထွန်းရွှေနှင်.မြို.ခံများထင်သေး၏ ။ သို.သော်ဗိုလ်ချုပ်စိတ်ဆိုးသည်မှာကားဤသို.ဖြစ်ပေကြောင်း ငေါက်ငမ်းပြောဆိုမှသိရလေသည် ။ဗိုလိချုပ်အောင်ဆန်းသည် သူ.ကိုကောက်ညင်းပေါင်းကျွေးထားသောအိမ်ရှင်ရယ်လို.လည်းမထောက်ညှာ ။ သူ.ကိုကားစီးရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးသည်ကိုလည်းကျေးဇူးမတင်သည်.အပြင်
“ ဒီမှာ ဦးထွန်းရွှေ ခင်ဗျားတော်တော်အသုံးမကျပါလား ၊ အခုလိုတစ်တိုင်းပြည်လုံး လူတွေဆင်းရဲငတ်ပြတ်နေတဲ.ခေတ်ထဲမှာ ကျုပ်စီးဖို.ကားတစ်စီးကို ပြည်ကနေ ၊ပန်းတောင်းအထိ မြစ်ကူးချောင်းခြား ဖောင်နဲ.သယ်လာတယ်ဆိုတာ ဘယ်လောက်ရှက်ဖို.ကောင်းသလဲ ။ မတော်တဆ ကားမြစ်ထဲထိုးကျသွားရင် ဘယ်လောက်ငွေတွေလျော်ရမလဲ ။ ဒီလိုဖားတာမျိုးကိုကျုပ်လုံးလုံးမကြိုက်ဘူး ၊ ဒီအတွက်ကုန်မယ်.ငွေတွေကိုတိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက် ရန်ပုံငွေထည်.ကြစမ်းပါ မယောင်ရာဆီမလူးကြပါနဲ. “
ဦးထွန်းရွှေသည် သူ.ကိုလူပုံအလည်တွင်နှစ်ပြားမတန်အောင် ရှုတ်ချပြောဆိုသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို စိတ်မနာရုံမက ၊ ထိုင်ပြီး ရှိခိုးဦးချချင်လောက်အောင်ပင်ကြည်ညိုလွန်းသဖြင်.မျက်ရည်များဝဲလာပေတော.သည် ။
“ ဒီကနေ တရားဟောမယ်.နေရာကို ဘယ်လောက်ဝေးသလဲ ဦးထွန်းရွှေ “ ဟူသောဗိုလ်ချုပ်အသံကိုကြားမှ သူ.စိတ်ကိုအမြန်ထိမ်းချုပ်ကာ
“ တစ်မိုင်ခွဲလောက်တော.ဝေးပါတယ် ဗိုလ်ချုပ် “ ဟု ကမန်းကတမ်းဖြေလိုက်မိလေသည် ။
“ တစ်မိုင်ခွဲဆိုတာ ဘာဝေးသလဲဗျာ ၊ စစ်အတွင်းက ဒိထက်ဝေးတဲ.နေရာတွေကျုပ်လမ်းလျောက်လာတာပဲ ၊အခုလဲလမ်းလျောက်ကြတာပေါ. ။ အဆောင်အယောင်တွေ ပကာသနတွေ ကျုပ်မကြိုက်ဘူး ၊ကျုပ်လိုချင်တာလွတ်လပ်ရေးစိတ်ဓါတ်ပဲ ၊ ကဲရှေ.ကလမ်းပြကြ “ ဟုဆိုကာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် ဖော.ဦးထုပ်ကိုဆောင်းကာ အိမ်ပေါ်မှ ဗြုန်းဆိုဆင်းသွားသဖြင်. ဖ.ဆ.ပ.လ နှင်. မြို.ခံများသည် ကပျာကယာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနောက်မှ ပြေးလိုက်ကြရပါကြောင်း .....
စာရေးသူ Unknown အချိန် 8:33 PM